Raysalwasaare Rooble oo helay codka Kalsoonida | Somalia News
Deg deg: RW Rooble oo caawa magacaabay golihiisa Wasiirrada
MUQDISHO (HALBEEG) – Ra’iisal wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa cawa magacaabay liiska golaha Wasiirada, Wasir-ku xigeennada iyo Wasiiru dowlayaasha Xukuumadda Soomaaliya. Maxamed Xuseen Rooble ayaa heystay muddo 30 maalmood oo uu dastuurka Soomaaliya u siinayo inuu ku soo magacaabo golihiisa cusub ee Wasiirrada ayaa caaw wareegto ka soo baxday xafiiskiisa ku magacaabay golaha Wasiirrada Xukuumadiisa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa 18-kii Sebteembar u magacaabay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble, Rooble ayaa muddo 30 maalmood kaddib ah ku dhawaaqay Golaha Wasiirrada Xukuumadda Soomaaliya oo ka kooban 27 wasiir, 17 Wasiiru-dowle iyo 26 Wasiir ku-xigeen. Waregtada ayaa sidoo kale Wasiirrada cusub lagu amray in ay xilalakooda la wareegan kaddib marka la dhaariyo. Halkan hoose ka akhriso liiska Golaha Wasiirrada, Wasiir ku-xigeennada iyo Wasiiru dowlayaasha: Post Views:10 Related Let’s block ads! (Why?)
Raysalwasaare Rooble oo helay codka Kalsoonida
Raysalwasaaraha Xukuumadda Federaaliga ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta heley codka kalsoonida.
Fadhiga Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa dhamaa 215 Xildhibaan, waxaana dhamaantood u codeeyeen in ay kalsoonida siiyaan, ma jirin cid diidey iyo cid ka aamustey.
Raysalwasaraae Rooble ayaa isla goobta lagu dhaariyey, kadib markii uu helay codka kalsoonida.
Raysalwasare Rooble ayaa hadda laga doonayaa in uu soo dhiso xukuumad cusub.
Magacaabidda Raysalwasaara ayaa imaaneysa iyada oo xiligii Dowladda ay ka harsan tahay muddo aad u yar, waxaana jira shaki la qabo in ay dhici doonto muddo kororsi gaareysa 13 bilood.
Madaxweyne maxamed Csbdullaahi farmaajo oo fadhiga ka soo qaybgalay kadib kalsooni siinta raysalwasaare Rooble ayaa fadhiga soo xirey.
The post Raysalwasaare Rooble oo helay codka Kalsoonida appeared first on Horseed Media • Somali News.
Previous articleDeg Deg Xildhibaanada Golaha Shacabka oo cod caqlibad leh ku ansixiyay Ra’iisul wasaaraha Cusub ee Soomaaliya
Next articleMohamed Roble unanimously endorsed by MPs as new PM
Gabar Muqdisho laga afduubtay oo lagu bad-baadiyey Guriceel
MUQDISHO — Hibo Maxamed Xasan oo ah gabar da’ yar oo la sheegay in shalay laga afduubtay magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay magaalada Guriceel, sida ay sheegeen ehelkeeda. Hibo ayaa waxaa la sheegay in kooxdii afduubtay ay uga dhaqaaqeen waddo, kadibna ay tagtay saldhigga booliska halkaasi oo lagu bad-baadiyey. Baaritaan kadib ayaa lagu soo warramay in sidoo kale lasoo qabtay kooxdii afduubka gaysatay iyo baabuurkii ay wateen, waxaana kiiskan weli baaraya saraakiisha ciidamada ee Guriceel. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warkan kasoo diray Muqdisho.